fanontaniana 737 MAX
1 taona 2 volana lasa izay #742 by jimidget
Boeing dia nivoaka niaraka tamin'ny 737-MAX izay mampiasa motera mitovy amin'ny 787 izay sarotra kokoa ny mihazakazaka, noho izany manome ny fiaramanidina ho lava be. Mety misy zavatra hafa tsy fantatro momba izany. Moa ve misy vintana fa amin'ny hoavy dia afaka mahita izany amin'ny download izany?
1 taona 2 volana lasa izay #743 by jamesman8
Misy zavatra maro tsy mety amin'ity lahatsoratra ity. Voalohany, ny 737MAX dia manodidina ny herintaona sy tapany eo ho eo, ary efa nanidina ara-barotra hatramin'ny May 2017 (Malindo Air). Faharoa, HAHAHAHAHAHAHAHAHA. Ny 737MAX sy ny 787 dia mampiasa milina mitovy? Lehilahy ambony ve ianao? Ny motera ampiasaina amin'ny 787 dia mitovy amin'ny haben'ny 737 manontolo. Ny 787 dia mampiasa ny GE GEnx sy ny Rolls Royce Trent 1000, mandritra izany fotoana izany ny 737 dia mampiasa ny CFM LEAP-1B. Tsy misy dikan-teny tsara amin'ity fiaramanidina ity ho an'ny FSX / P3D ankoatra ny TDS ivelany. Ny PMDG dia tsy namoaka ny heviny momba izany.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Whitten
1 taona 2 volana lasa izay #744 by jimidget
Wow. Jamesman8 dia manana olana amin'ny toe-tsaina. Mety tsy voatery ho marina foana aho, fa tonga kosa izao fotoana izao. Indro ny boeing momba ny teknolojia Boeing teknolojika momba ny andian-tantara MAX an'ny 737. Angamba misy olona manan-danja afaka hamaly ity fanontaniana ity:
1 taona 2 volana lasa izay #745 by jamesman8
Ho hitanao fa tsy misy toerana akaiky anao, dia mampiasa fitaovana tanteraka izy ireo, ary namaly ny fanontanianao aho. Ny TDS 737 MAX dia hita ato amin'ity tranonkala ity. Mandehana maka azy.
Misaotra anareo nandray: 21
1 taona 2 volana lasa izay #746 by Gh0stRider203
Manome safidy roa aho. 1) mivoatra sy mifankatia; Na 2) Voahidy io kofehy io aho. Tsy misy safidy 3rd.
1 taona 2 volana lasa izay #749 by jamesman8
Azonao atao ny manidy azy, mamaly ny fanontaniany aho. Tsy manambany aho fa mitaky zavatra madio fotsiny.
Misaotra anareo nandray: 45
1 taona 2 volana lasa izay #751 by Dariussssss
Satria ity lohahevitra iray manontolo ity dia nahatonga ahy hihomehy toy ny tsy nisy teo aloha, tsy hamafa azy aho ..... lol
1 taona 2 volana lasa izay #764 by superskullmaster
Mety ho ahy fotsiny izany saingy tsapako fa misy olona tena mangataka izany, tsy maintsy omenao azy ireo. Manana aterineto sy google isika rehetra, tsy hitako izay fahadisoana nataon'ireo lahatsoratra niaviany. Saingy tena mampihomehy.
1 taona 1 volana lasa izay #778 by Gh0stRider203
Miondrika mba hahafahana manompo amin'ny maha-ohatra ny zavatra tsy tokony hatao rehefa manao lahatsoratra (ary ahoana ny amin'ny hoe (~ kohaka ~ "tsy") mamaly ireo lahatsoratra toy izany.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Dariussssss
1 taona 1 volana lasa izay #781 by julian1245
Hevero hoe inona ny jimidget dia manandrana milaza fa izy ireo dia nanao kopia ny motera tao amin'ny 787 ary nametraka azy ireo tao amin'ny 737 max fa james dia marina fa 2 hafa motora saingy azoko hoe inona ny jimidget dia manandrana milaza fa toy ny motera mitovy izy ireo ary izaho miombon-kevitra.
Miangavy anao ihany koa ny olona masira satria fantatro fa ao amin'ity tranonkala ity ry zareo